Boston, ity no tanàna tsy mampino an'i Etazonia | Vaovao momba ny dia
Boston, ny Athens of America
Mariela Carril | | General
Boston izy dia iray amin'ireo tanàna manan-tantara indrindra any Etazonia ary iray amin'ireo mahasarika indrindra hitsidika azy. Izy io dia ampahany amin'ny vondron'olona voafantina naorina eo amin'ny morontsiraka atsinanan'ny firenena, ny toerana nanorenan'ny firenena.
Amin'ny fotoana iray amin'ny tantarany efa an-jato taonany anaram-bosotra no anarany «ny Athens of America », Ka anio isika dia hiatrika ity tanàna ity, izay azontsika fantarina, tsidihina, ankafizintsika, ianarantsika. Andao atomboka ny dia.
2 Zavatra tokony hatao any Boston
Io no iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra amin'ity faritra ity ary koa Iray amin'ireo tranainy indrindra hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 1630 avy amin'ny tanan'ny mponina puritanina avy any Angletera. Ireo fotoana nanoloran'ny zanatany fanjakana mahaleo tena tamin'ny satro-boninahitra britanika dia nitranga teto.
Hatramin'ireny andro lavitra ireny dia nijanona ho seranan-tsambo manandanja tany Atlantika i Boston, ary miaraka amin'izay koa a tanàna manana kolontsaina manankarena sy haavo fanabeazana.
indrindra amin'ireo andrim-pampianarana ananany dia ny anaram-bosotra ny Athens of America. Manana oniversite sy oniversite maro i Boston ary ivontoerana fanabeazana malaza iraisam-pirenena.
Tanora amerikanina maro na mpianatra avy amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao no tonga amin'ny oniversite malaza sy lafo vidy. Anisan'ireo fantatrao tsara fa Harvard, ny MIT (Massachusetts Institutte of Technology), ny Tuff anjerimanontolo, Boston anjerimanontolo na ny Suffolk anjerimanontolo, mba hanonona vitsivitsy fotsiny.
Ireo andrim-pampianarana rehetra ireo, isaina izany, mampiasa 7% amin'ny mponina ao an-tanàna, noho izany dia manan-danja izy ireo. Misy ihany koa ny sekoly tsy miankina, ny ankamaroany dia natokana indrindra amin'ny lalàna sy ny fitsaboana.
Ny anarana Athens of America dia namboarina nandritra ny tapany voalohan'ny taonjato faha-XNUMX ary araka ny tantara ofisialy misimisy na latsaka dia hita tao amin'ny taratasy nosoratan'i Samuel Adams tamin'ny 1764 izay nanoratany momba ny fahafahan'i Boston ho tonga Christian Sparta. Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX dia nisy referansa epistolary hafa niseho, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia miresaka momba an'i Atena.
Ny marina dia eo amin'ny tehezany andrefan'ny Beacon Hill ankehitriny dia misy sarivongan'i Aristides the Rightelf, jeneraly grika iray ary mpitondra fanjakana nitarika ny fivondronan'ireo fanjakana tanànan'ny Gresy taloha. Andininy izay manamafy ny anaram-bosotra ny tanàna.
Zavatra tokony hatao any Boston
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia Freedom Trail, fitsidihana fijanonana manan-tantara 16 izay milaza amintsika ny tantaran'ny firenena. Misy làlana voamariky amin'ny mena izay mitarika ireo izay mandray azy ary mandrakotra totalin'ny telo kilometatra sy sasany. Eo amin'ny làlana misy trano manan-tantara, fiangonana, tranombakoka.
Afaka manao izany samirery ianao na misoratra anarana amin'ny iray amin'ireo dia an-tongotra isan'andro. Ny tapakila dia azo vidiana amin'ny tranokala Freedom Trail, izay manolotra torolàlana momba ny feo ihany koa. Kajy izay maharitra 90 minitra ary miakanjo toy ny tamin'ny taonjato faha-XNUMX ireo mpitari-dalana.
Mifindra manodidina ny tanàna azonao atao ny mampiasa tambajotra bisikileta ho an'ny daholobe, ny Hubway, misoratra anarana amin'ny Internet: misy bisikileta 1600 sy gara miisa 160 manerana an'i Boston, Cambridge, Brookline ary Sommerville, na ny midadasika tambajotram-piaran-dalamby, bus ary bus fitaterana rano.
Raha manana toetr'andro tsara ianao ary te hankafy ny any ivelany, dia azonao atao izany Saha zaridaina, valan-javaboary tena lehibe iray izay tsara tarehy amin'ny vanim-potoana rehetra, misy farihy iray ahafahanao mandeha amin'ny sambo swan sy nosy, Duck Island, izay tsara ho an'ny fitsangatsanganana rehetra.
Raha tianao ny fampisehoana zavakanto dia tsy maintsy mijery ny manodidina ianao ny Distrikan'ny Teatra izay eo afovoan-tanàna. Misy teatra taloha efa tafaverina amin'ny laoniny tsara, seho an-tsehatra, dihy, balleta, hatsikana ary maro hafa. Tianao ve ilay Lehilahy Manga, ohatra? Azonao atao ny mahita azy ireo miaina any Boston.
Ho an'ny sakafo sy fiantsenana, ny tsara indrindra dia ny Newbury Street manana tranobe tsara tarehy taloha izy io. Betsaka amin'ireo tranobe ireo no navadika ho boutique, kafe ary trano fisakafoanana ary raha fahavaratra dia misy latabatra sy seza eo amoron-dalana. A tranonkala tena milay ary lamaody, tranonkala iray izay azonao zahana amin'ny anao samirery na miaraka amin'ny fanampian'ny mpitari-dalana eo an-toerana izay manampy anao maimaim-poana.
Raha jiosy ianao aza misy fitsangatsanganana iray mizaha ny fahasamihafan'ny kolontsaina jiosy any Boston sy ny tanàna hafa. Mahaliana. Ary noho izany, rehefa mandeha ianao dia mety hahatratra ny morontsiraka Atlantika, rehefa voahodidin'ny rano ny tanàna rehetra.
Misy fomba fijery mahafinaritra, lalamby, zaridaina ary manamorona ny morontsiraka dia ho hitanao ireo trano, trano fisakafoanana, hotely na sambo mamaky ny ranomasina manararaotra ny fomba fijery. Raha tianao ny hevitra momba maka sambo fitsangantsanganana afaka mandeha any amin'ny Port Cruise Port Boston ianao ary mandray iray.
Miaraka amin'ny anaran'ny Fetin'ny dite ny sehatra tena mifantoka amin'ny zon'ny amerikana dia fantatra, fotsy, manankarena ary manan-kery. Ny Tea Party dia sambo ary fanoherana ihany koa ny vidin'ny dite, fa androany kosa dia manana fialamboly izay mandeha ihany koa tranombakoka mitsingevana. Ny traikefa haino aman-jery natolony dia mahavariana ary mitentina 26 $.
Ny diabe ara-tantara no azonao atao ho an'ny faritra misy an'i Beacon Hill, miaraka amin'ireo tranony biriky mena mahafinaritra sy arabe mihodinkodina ary lalantsara tery. Iray amin'ireo tanàna lafo vidy indrindra eto an-tanàna izy io ary ankoatry ny hatsaran-tarehy sy kanto dia manolotra fitsidihana mahaliana: ny Làlan'ny Black Heritageary ny Boston Athenaeum, fivarotam-boky taloha nanomboka tamin'ny 1807 izay nanisa an'i Louisa May Alcott (mpanoratra ny Little Women) amin'ireo mpikambana ao aminy.
40 taona mahery ve ianao ary tadidinao fa nahita an'io andian-tsarimihetsika fahitalavitra? Ilay nitranga tao anaty trano fisotroana iray. Raha tianao eto afaka mitsidika ny fisotroana ianao, ny fialam-boly toy ny an'ny Cheers bar izay natsangana tao amin'ny Tsenan'ny Faneuil, faritra misy trano fisotroana labiera, trano fisotroana irlandey ary bara isan-karazany izay manome fiainana be dia be amin'ny alin'ny Boston.
Ary farany, tsy manana tranombakoka na kianja fanaovana fanatanjahan-tena i Boston ka raharaha fotsiny ny fanaovana drafitra mba tsy hijanonana mankafy ilay zava-dehibe sy tsy hay hadinoina eto an-tanàna.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Boston, ny Athens of America
Zavatra maimaim-poana any Milan, dia lavitra
Gastrozika sinoa, fomba valo matsiro tokoa